स्पेनमा आक्रमणकारी रूखहरू - सबै रूखहरू | सबै रूखहरू
आजकल संसारको कुनै पनि देशबाट रूखहरू प्राप्त गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ। तर यो, यद्यपि यो धेरै राम्रो छ किनकि यसले हामीलाई धेरै प्रजातिहरू पाउन अनुमति दिन्छ, यसको नकारात्मक पक्ष पनि छ यदि हामीले यसलाई सही तरिकाले गरेनौं। वास्तबमा, आइलान्थस जस्ता रूखहरू पहिले सजावटको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो, तर आज तिनीहरू तिनीहरूलाई मेटाउन लडिरहेका छन्।। किन?
किनभने यो रूख स्पेनको हावापानीसँग धेरै राम्रोसँग अनुकूलन गर्न सक्षम भएको छ, विशेष गरी भूमध्य क्षेत्रबाट। यसले खडेरीलाई समर्थन गर्दछ, र यसको बीउ, जुन ठूलो संख्यामा उत्पादन गरिन्छ, सजिलै अंकुरित हुन्छ। त्यहाँ मानिसहरू छन् जसले यसलाई यति घृणा गर्छन् कि जब तिनीहरूले यो जस्तै धेरै देखिने देख्दा अचम्म लाग्दैन, जस्तै टूना सिनेन्सिसT. sinensis सबै आक्रामक छैन भन्ने तथ्यको बावजुद, यो एक ailanthus हो भनेर सोच्नुहोस् र नराम्रो आँखाले यसलाई हेर्नुहोस्।
यसको लागि, र गलतफहमीबाट बच्नको लागि, यस खण्डमा हामी स्पेनमा आक्रमणकारी रूखहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं; आक्रामक प्रजातिहरूको स्पेनी क्याटलगमा समावेश भएकाहरू मात्र होइन, आक्रमण गर्ने क्षमता भएकाहरू पनि।
Ailanthus altissima एक धेरै छिटो बढ्दो रूख हो जसमा अनुकूलनको लागि ठूलो क्षमता छ यदि यो नजिक छ ...